च्याम्पियन्स लिगमा किन असफल इंग्लिस क्लब ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 12:13:53
जापानी समय : 03:28:53
18 May, 2017 16:56 | खेल | comments | 41250 Views
च्याम्पियन्स लिगको जारी सिजनको फाइनल समीकरण पूरा भएको छ । यस्तोमा स्पेनिस जाइन्ट रियल म्याड्रिड र इटालियन क्लब युभेन्टस उपाधिका लागि भिड्दै छन् ।
तर, यसपटक च्याम्पियन्स लिगमा इंग्लिस क्लबमाथि निकै ठूलो प्रश्न तेर्सियो । पछिल्लो समय किन च्याम्पिन्यन्स लिगमा इंग्लिस क्लब असफल ? यसअघि पनि थोर–बहुत आलोचना र बहस भए पनि यसपटक इंग्लिस क्लबहरूमाथिको च्याम्पियन्स लिग असफलतामा युरोपका प्रतिष्ठित मिडियाहरूमा निकै ठुलै बहस भयो र अझै जारी छ । त्यसो त फुटबलका उम्दा विश्लेषकहरूले पनि प्रिमियर लिग क्लबहरूको खुलेरै आलोचना गरे ।
विश्व फुटबलमा सर्वाधिक हेरिने र सर्वाधिक धनराशि खर्च गरिने क्लब फुटबलको चर्चित लिगका रूपमा रहने प्रिमियर लिगका क्लब च्याम्पियन्स लिगमा किन असफल भए भनेर बहस हुनु नौलो होइन, तर अब इंग्लिस क्लब फुटबल के ओरालोतर्पm झरेको हो ? यो बहस सिर्जना भएपछि भने इंग्लिस फुटबलमा तरंग सिर्जना भएको छ ।
त्यसो त २०१२ मा चेल्सीले इंग्लिस क्लबको तर्फबाट उपाधि जितेको हो । डिडियो ड्रोग्बा म्यान अफ द म्याच घोषित भएको फाइनल भिडन्तमा जर्मन जाइन्ट वार्यन म्युनिखलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गरेर चेल्सीले उपाधि जितेको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ । त्यसैले पनि इंग्लिस क्लबमाथिको आलोचना अब फुटबलमा इंग्ल्यान्डराजको अन्तका रूपमा हेर्न सुरु गरिएको हो ।
त्यसो त सन् २००७ देखि २००९ सम्म इंग्लिस क्लबहरूको च्याम्पिन्स लिगमा दबदबा रह्यो । तीन इंग्लिस टिमले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउँदा इंग्लिस क्लबबीच नै सन् २००८ मा फाइनल भिडन्त भएको थियो । म्यानचेस्टर युनाइटेड र चेल्सीले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गरे त्यसो त बिग फोका रूपमा चिनिने आर्सनल, चेल्सी, लिभरपुल र म्यानचेस्टर युनाइटेडले क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएका थिए ।
तर, पछिल्लो समय ६ प्रिमियर लिग च्याम्पियनहरू पाँचपटक च्याम्पियन्स लिगको शीर्ष १६ बाटै बाहिरिए । जुन इंग्लिस फुटबलका लागि निकै पीडादायक सत्य हो । यद्यपि, यसपटक साविक च्याम्पियन लिसेस्टर सिटीले क्वार्टरफाइनलसम्म स्थान बनायो, तर फेरि शीर्ष चार भने इंग्लिस क्लबविहीन रह्यो ।
पछिल्ला ६ वर्षमा च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा सर्वाधिक स्थान बनाउनेमा स्पेन १७ पटक जर्मनी १० पटक फ्रान्स सातपटक इंग्ल्यान्ड पाँचपटक इटाली चारपटक पोर्चुगल तीनपटक तथा टर्की र साइप्रसले एक–एकपटक स्थान बनाएका छन् । यस्तोमा प्रिमियर लिगको क्वार्टरफाइनलमा इंग्लिस क्लबको दयनीय अवस्थालाई संकेत गरेको आलोचकहरूको तर्क छ ।
पछिल्ला ६ वर्षमा च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा सर्वाधिक स्थान बनाउनेमा स्पेन १७ पटक जर्मनी १० पटक फ्रान्स सातपटक इंग्ल्यान्ड पाँचपटक इटाली चारपटक पोर्चुगल तीनपटक तथा टर्की र साइप्रसले एक-एकपटक स्थान बनाएका छन् । यस्तोमा प्रिमियर लिगको क्वार्टरफाइनलमा इंग्लिस क्लबको दयनीय अवस्थालाई संकेत गरेको आलोचकहरूको तर्क छ ।
त्यसो त शीर्ष भनिएका इंग्लिस क्लबहरूको इंग्लिस प्रिमियर लिगमा नै अस्थिर प्रदर्शन उनीहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ । गत सिजन प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको लिसेस्टरको जितपछि शीर्ष चार क्लबमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भयो । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा टोटनह्याम जबर्जस्त रूपमा प्रिमियर लिगमा हावी भइरहेको छ । सर एलेक्स फर्गुसनले छोडेपछि म्यानचेस्टर युनाइटेड अझै लयविहीन छ । उसले प्रशिक्षकहरू खोज्दै केही नयाँ गर्न खोजिरहेजस्तो देखिए पनि प्रदर्शन अस्थिर छ । जसको कारण युनाइटेड अभैm पनि प्लेइङ इलेभेनकै खोजीमा रहन्छ ।
लिभरपुल, आर्सनलको सधैं एउटै चिन्ता हुन्छ । च्याम्पियन्स लिगमा छनोटका लागि आवश्यक पर्ने शीर्ष चारमा कसरी रहने भन्ने तर उपाधि नजितेको धेरै समय भइसक्दा पनि नतिजाका लागि ठोस पहल गर्न सकिरहेको छैन । त्यसो त इंग्लिस क्लबहरूमाथि अन्य युरोपियन क्लबलाई कमजोर आँकलन गर्ने गरेको आरोप सदियौंदेखि लाग्दै आएको छ । त्यसो त इंग्लिस टिम बढी चलाखी रूपमा खेल्न नसक्दाको परिणाम च्याम्पियन्स लिग असफलता मान्ने जमात पनि निकै छ ।
त्यसो त इंग्लिस क्लबहरू आफ्नो दृष्टिकोण नबदल्ने र ठाउँअनुसार फर्मेसन परिवर्तन गर्न नसक्ने कारण च्याम्पियन्स लिग फुत्कने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । साथै, उनीहरूमा प्रतिद्वन्द्वी क्लबप्रतिको सम्मान कमजोर हुने गरेको र अन्य साना युरोपियन देशका क्लबहरूलाई हेप्ने शैली अख्तियार पनि पराजयको कारण मानिने गरेको छ ।
त्यस्तै, इंग्लिस क्लबहरू आफैमा ब्रान्ड भइसकेका छन् । यस्तोमा उनीहरूको ब्रान्डिङ समस्या पनि अर्को कारणका रूपमा हेरिएको छ । जबकि, फुटबल उनीहरू नामले नै खेल्ने कोसिस गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरू आफ्नो ब्रान्ड नेमका कारण सँधै पराजित हुन पुगेको एकथरिको विश्वास रहँदै आएको छ ।
यो सिजन नयाँ प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा खरो देखिएका चेल्सीका प्रशिक्षक एन्टेनो कोन्टेको भनाइ मान्ने हो भने फुटबलमा इंग्लिस क्लबहरूको समान धारणा युरोपका अरू क्लबहरूप्रतिको खराब नजर रहेको बताउँछन्, कोन्टेले । क्लब फुटबलमा युरोपमा सबैलाई उही स्थानमा राखेर हेरीनु नै इंग्लिस क्लबको असफलता भएको उनको बुझाइ छ । गत सिजन निकै खराब लयको चेल्सीलाई लगभग च्याम्पियन बनाइसकेका कोन्टेले के इंग्लिस क्लबप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्लान् त ? अर्को सिजन हुने च्याम्पियन लिगको भिडन्तले नै यसको जवाफ दिनेछ । तर, फेरि पनि इंग्लिस क्लबप्रतिको शंका भने कायमै छ ।
पछिल्लो समय इंग्लिस क्लबको जितको रेट निकै खराब रहेको तथ्यांक सार्वजानिक भयो । जसमा च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणको खेलमा १७ प्रतिशत रहेको देखियो जुन पछिल्ला २० वर्षयताकै कमजोर मानिएको छ । सन् १९९५÷९६ मा पनि जितको रेटिङ १७ प्रतिशत नै रहेको थियो ।
२००८-९ को सिजनमा इंग्लिस क्लबको प्रतिनिधित्व गरेका युनाइटड, चेल्सी, आर्सनल र लिभरपुलले समूह चरणमा दुईवटा मात्र हार बेहोर्नुुपरेको थियो । जसमा तीन इंग्लिस क्लबले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका थिए ।